By Tachileik News Agency - October 16, 2008
By Tachileik News Agency - October 14, 2008
​ေကာင်း​ကင်တစ်စံု ​ေအာက်က မွန်း​ြကပ်မှု​ေတွနဲ့​ လူသား​များ​စွာ “နံဖူး​က​ေချွး​ ​ေြခမကျ” ဆိုတဲ့​ ​ေဆာင်ပုဒ် သူတို့​မှာ ရှိတယ်.........
ပင်ပန်း​မှု​ေတွနဲ့​ရင်း​နှီး​ြပီး​မှရတဲ့​ မတန်တစ်ဆ ​ေလး​ေတွကို မိသား​စုအတွက် ​ေထာက်ပံကူညီ​ေနရတဲ့​ လူသား​များ​စွာ “တစ်​ေန့​လုပ် တစ်​ေန့​စား​” ဆိုတဲ့​ ​ေဆာင်ပုဒ် သူတို့​မှာရှိတယ်…...............
ဘဝအတွက် “မ​ေရရာတဲ့​ မနက်ြဖန်”​ေတွမှာ သူတို့​ေတွ ရှင်သန်​ေနြကရတယ်…
“ြဖစ်ချင်တာြဖစ် ​ေမာင်ဘချစ်” ဆိုတဲ့​ ​ေဆာင်ပုဒ်ကို ကိုင်​ေဆာင်ထား​ြကတဲ့​ လူတစ်ချို့​… မိသား​စု အသိုက်အြမံုအတွက် ဘဝကို “စွန့်​လွှတ်ရဲတဲ့​ သတ္တိ”သူတို့​မှာရှိတယ်…။
အညတရ​ေတာ့​မဟုတ်ြက​ေပမဲ့​ အညတရြဖစ်​ေအာင် ကံြကမ္မာက ​ေစညွန်ြပန်​ေတာ့​ ပင်ပန်း​မှု​ေတွြကား​မှာလူ​ေပါင်း​များ​စွာ ရုန်း​ကန်​ေနဆဲ​ေပါ့​......
ဘဝများ​စွာ​ေတွအတွက် ပံုြပင်ထဲက ြမစ်​ေစာင့်​နတ်လို ြကင်နာမှုရှိရင် မွန်း​ြကပ်မှု​ေတွြကား​က လွတ်​ေြမာက်နိုင်​ေသး​ရဲ့​.................
အချစ်ဆိုသည်မှာ ( Tag )
By Tachileik News Agency - October 09, 2008
ဒီတစ်ခါလည်း​ ကိုြကီး​လင်း​ထက် က ပညာသား​ပါပါ​ေလး​နဲ့​ cbox မှာ ​ေအာ်သွား​တဲ့​ ​ေြကာ်ြငာထား​ပံု​ေလး​ြကည့်​ပါအံုး​ဗျာ“ အချစ်ဆိုတာဘာလဲ? အဲဒီအဓိပ္ပာယ် ကိုဖွင့်​ဆိုမယ့်​ ဒဿနိကပညာ ရှင်များ​ စာရင်း​ေလး​ လာြကည့်​ပါအံုး​”တဲ့​ တဂ်ထား​တယ်လို့​ မ​ေြပာဘူး​ ကိုလင်း​ြကီး​က လူလည်ြကီး​ေနာ် ဟီး​ဟီး​. ကဲ...​ေရး​လိုက်ြပီဗျို့​ကိုလင်း​ြကီး​ေရ့​…
~~~ အချစ်ဆိုသည်မှာ ~~~
မဟူရာ​ေချာက်က ဘယ်​ေလာက်ပဲနက်နက် တိုင်း​ထွား​လို့​ရရင်ရနိုင်​ေကာင်း​ရဲ့​
တစ်​ေယာက်​ေသာ သူကိုချစ်မိ​ေသာ အချစ်က​ေတာ့​ အတိုင်း​အဆမရှိ တိုင်း​ထွာလို့​မရ
​ေအး​သ​ေယာင်နဲ့​ ပု​ေလာင်လှပါတယ် ပူမှန်း​သိလျှက်နဲ့​ေရှ့​ဆက်တိုး​ေသာ
သား​ရဲသတ္တဝါလို ငါ့​ရဲ့​အြဖစ်ကတူလွန်း​တယ်… ချစ်သူမင်း​ကို မချစ်မိဖို့​ ဘယ်​ေလာက်ပဲ
အြကိမ်ြကိမ် အား​တင်း​ထား​ေပမဲ့​ နက်နည်း​လှ​ေသာ ချစ်စိတ်များ​ေြကာင့်​ အပူမီး​ကို ငါဆုပ်ကိုင်​ေနမိြပီ….
တီထွင်မှုမရှိ​ေသာ​ေြကာင့်​ အတိုင်း​အဆမရှိ အ​ေြဖများ​စွာကိုဆုပ်ကိုင်ထား​ေသာအရာြဖစ်သည်
ထို့​ေြကာင့်​…. အချစ်သည် ​ေြဖရှင်း​ရခက်​ေသာ ပုဒ်စ္ဆာ…….
​ေမျှာ်လင့်​မထား​ေသာ အိပ်မက်ကိုမက်​ေနရသလို ​ေလထဲအ…
By Tachileik News Agency - October 05, 2008
လိုချင်တတ်မတ် ​ေလာဘ​ေတွက မီး​ေတာက်မီး​လျှံလို ​ေတာက်​ေလာင်​ေနချိန်် အြဖူအမဲ ခွဲြခား​မသိ မြမင်နိုင်တဲ့​အခိုက်မှာ​ေတာ့​ အမှား​ေပါင်း​များ​စွာ ကို ကျူး​လွန်ခဲ့​သူ သင်ဟာ မာန်နတ်ကို ဆရာတင် အမဲကိုအြဖူြမင် အလင်း​ကိုအ​ေမှာင်ြမင် အမှား​ကိုအမှန်ထင်​ေတာ့​ ကျန်လူများ​စွာ ဒုက္ခကို အလှဆင်ခဲ့​ြကရြပီ….။ မထူး​ေတာ့​တဲ့​ ဇာတ်ကို မိုး​လင်း​အထိ ထိုင်ြကည့်​ေနဖို့​ မတတ်နိုင်​ေတာ့​တဲ့​ေနာက်​ေတာ့​ အိမ်ကိုြပန်ဖို့​ ခွန်အား​သစ်​ေတွ ​ေမွး​ရ​ေပအံုး​မည်။
စပ်မိစပ်ရာ ( ၁ )
By Tachileik News Agency - October 03, 2008
ငယ်ငယ်တုန်း​က လူအများ​ေြပာြက​ေသာ စကား​ေလး​တစ်ခွန်း​ ရှိခဲ့​ပါသည်။ “စိတ်ညစ်လိုက်တာ”တဲ့​ အဲ့​ဒီစကား​လံုး​ကို ငယ်စဉ်တုန်း​က ဘာအဓိပ္ပါယ်မှန်း​ မသိခဲ့​..။ အခု​ေတာ့​ ​ေလာကြကီး​ရဲ့​ ဘဝအဘိဓါန်ထဲမှာ ရှာြကည့်​လိုက်​ေတာ့​ စိတ်ညစ်လိုက်တာ ဆိုတဲ့​စကား​လံုး​က အတွင်း​နက်နက် စိတ်ကို ထံုမှိုင်း​ကွဲအက်​ေစသည်ဟု ကျွန်ုပ်ယူဆမိပါသည်.....။